Invitation to join Global Myanmar Spring Revolution Walking Rally (13th June)(Ended)
Announcements • Jun 8, 2021
6月13日（日曜日）に世界的なミャンマー春の革命日（Global Myanmar Spring Revolution)
※ グーグルのフォーム(Google Form)には、金曜日 (2021年6月11日) の6:00 PMまでに申し込みをお願い致します。
"Joining at Global Myanmar Spring Revolution Walking Rally on 13th of June "
1. Recognise NUG (People Government) by International Communities
2. Set Myanmar cause as High Priority at G7 Summit
3. Recognise Myanmar cause is Global Cause
✊🏻 The first time Global Myanmar Spring Revolution was led and organised by Burmese in Taiwan and this second time was led and organised by Burmese in Japan, we would like to encourage to all of Myanmar ethnic brothers and sisters in Japan nationwide to join this event with all of our might.
We will be undertaking Global Myanmar Spring Revolution Walking Rally on 13th of June all across the Globe.
We TTAJ will also be joining as one of the marching groups at Tokyo Rally.
📆 Date - (13-6-2021) Sunday
⏰ Time - 10:00-12:00
📍 TTAJ Gathering Time and Place - Omotesando A3 Exit (Time - no later than 9:45)
We have to set the time and place different and in prior since we TTAJ will be joining as one marching group.
Kindly fill out the google form in order to join as TTAJ volunteers.
we will be wearing all White and red forehead straps, and marching altogether all across the globe, aiming to win this Myanmar Spring Revolution.
Kindly follow these rules and regulations since we TTAJ will be joining asagroup.
📌 Fill out the Google Form no later than 6pm 11/6/2021 (Friday).
📌 Please make sure to arrive at the gathering place no later than 9:45am since we will be departing asagroup.
Pant Jean Pants 👖
⚠️ If you have any questions on the day, please contact TTAJ members who will be wearing red strap.
Myanmar cause is GLobal cause.💪🏻💪🏻
"၆လပိုင်း ၁၃ရက်နေ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအဖြစ် လမ်းလျှောက်ချီတက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်း"
ပြည်သူ့အစိုးရ NUG ကို နိုင်ငံတကာမှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုရန်၊ G7 Summit တွင် မြန်မာ့အရေးကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးပါရန်နှင့်
မြန်မာ့အရေးသည် ကမ္ဘာ့အရေးဖြစ်ကြောင်း အရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ရေး ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲကိုလာမည့် ၆လပိုင်း ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး နေ့( Global Myanmar Spring Revolution ) အဖြစ် ကမ္ဘာအနှံ့ စုပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ပြုလုပ်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
✊🏻 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး ဆန္ဒပြပွဲကို ပထမအကြိမ် ထိုင်ဝမ်ရောက်မြန်မာများက ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခု ဒုတိယအကြိမ်တွင် ဂျပန်ရောက်မြန်မာများက ဦးဆောင်ကျင်းပမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဂျပန်ပြည်တွင်းရှိ တိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမအားလုံး တစ်ခဲနက် ပါဝင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်စေလိုပါတယ် ။
ဂျပန်နိုင်ငံဒေသအသီးသီးတွင်လည်း ဂျပန်ရောက်မြန်မာတိုင်းရင်းသားညီအကိုမောင်နှမများ စုပေါင်း၍ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြုလုပ်ကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် တိုကျို စုပေါင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် TTAJ အဖွဲ့က စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းအနေဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် အားဖြည့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
📆 နေ့ရက် - (13-6-2021) တနင်္ဂနွေနေ့
⏰ အချိန် - 10:00-12:00
📍 TTAJ စုချိန်နှင့်စုရပ် - Omotesando A3 Exit (အချိန် - 9:45အရောက်)
(※ စုပေါင်းချီတက်ပွဲတွင် TTAJ စစ်ကြောင်း အနေနှင့် သွားရောက်ပူးပေါင်းမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် ပင်မ စုရပ်နှင့် အချိန်ကို လွှဲပြီး ကြိုချိန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။)
⚠️⚠️ TTAJ Volunteers အနေနှင့် လာရောက် ပူးပေါင်းလိုသူများ Google Form Link လေးမှာ ဖြည့်ပေးပြီး စာရင်းလေးပေးစေချင်ပါသည်။
ပါတီစွဲမရှိမှု၊ သစ်လွင်မှု၊ ဖြူစင်မှုနဲ့ လွတ်လပ်မှုတို့ကို ကိုယ်စားပြုသောအနေဖြင့် အဖြူရောင် All White ဝတ်ဆင်ပြီး နှဖူးစည်းအနီရောင်များ ပြုလုပ်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အရေးတော်ပုံအောင်နိုင်ရေးအတွက် အတူတကွဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
အဖွဲ့လိုက် ပူးပေါင်းမှုဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ပါ အချက်လေးတွေကို တိတိကျကျ လိုက်နာပေးစေချင်ပါတယ်
📌သောကြာနေ့ (11-6-2021) ညနေ (၆) နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး Form ဖြည့်ပေးပါနော်။
📌 အဖွဲ့လိုက်သွားရောက်ပူးပေါင်းမှာဖြစ်သည့်အတွက် နံနက် (9:45) နာရီထက် လုံးဝ(လုံးဝ) နောက်မကျဘဲ စုရပ်ကို လာရောက်ပူးပေါင်းပေးစေလိုပါသည် ။
📌 TTAJ volunteerများအနေဖြင့် အောက်ပါ သတ်မှတ်အဝတ်အစားကိုသာဝတ်ဆင်လာပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
အောက် ဂျင်းဘောင်းဘီအပြာ 👖
⚠️ ပွဲနေ့ တွင် မရှင်းလင်းသည်များရှိပါက လည်ဆွဲကြိုး အနီဆွဲထားသော TTAJ အဖွဲ့ မန်ဘာများကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်